7 Zvino pashure pezvinhu izvi Jesu akaramba achifamba-famba muGarireya, nokuti akanga asingadi kufamba-famba muJudhiya, nokuti vaJudha vakanga vachitsvaka kumuuraya.+ 2 Zvisinei, mutambo wevaJudha, iwo mutambo wematebhenekeri,+ wakanga wava pedyo. 3 Naizvozvo vanun’una vake+ vakati kwaari: “Pfuura pano uende muJudhiya, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa aunoita. 4 Nokuti hapana munhu anoita chinhu pachivande asi iye achitsvaka kuzivikanwa pachena. Kana uchiita zvinhu izvi, zviratidze pachena kunyika.” 5 Chokwadi, vanun’una vake+ vakanga vasingatendi maari.+ 6 Naizvozvo Jesu akati kwavari: “Nguva yangu yakakodzera haisati yasvika,+ asi nguva yenyu yakakodzera inogara iripo. 7 Nyika haina chikonzero chokukuvengai, asi inondivenga, nokuti ndinopupura pamusoro payo kuti mabasa ayo akaipa.+ 8 Imi kwirai kumutambo; ini handisati ndava kukwira kumutambo uyu, nokuti nguva yangu yakakodzera+ haisati yanyatsosvika.”+ 9 Naizvozvo pashure pokunge avaudza zvinhu izvi, akaramba ari muGarireya. 10 Asi vanun’una vake pavakanga vakwira kumutambo, iye akabva akwirawo, kwete pachena asi pachivande.+ 11 Naizvozvo vaJudha vakatanga kumutsvaka+ pamutambo vachiti: “Munhu uya ari kupi?” 12 Kwakanga kuine kuzevezera kuzhinji pamusoro pake pakati pemapoka evanhu.+ Vamwe vaiti: “Iye munhu akanaka.” Vamwe vachiti: “Haasi, asi anotsausa boka revanhu.” 13 Chokwadi, hapana aitaura pamusoro pake pachena nokuti vaitya vaJudha.+ 14 Zvino mutambo pawakanga wava pakati, Jesu akapinda mutemberi, akatanga kudzidzisa.+ 15 Naizvozvo vaJudha vakatanga kushamisika, vachiti: “Munhu uyu anoziva sei mabhii,+ iye asina kudzidza kuzvikoro?”+ 16 Jesu, akavapindurawo, akati: “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma.+ 17 Kana munhu achida kuita zvinodiwa naIye, achaziva pamusoro pokudzidzisa kwacho kana kuchibva kuna Mwari+ kana kuti ini ndichitaura zvangu ndoga. 18 Anotaura zvake oga ari kutsvaka kukudzwa kwake oga; asi anotsvaka kukudzwa+ kweakamutuma, iyeyu ndowechokwadi, uye hapana kusarurama maari. 19 Mosesi haana kukupai Mutemo+ here? Asi hapana kana nomumwe wenyu anoteerera Mutemo wacho. Muri kutsvakirei kundiuraya?”+ 20 Boka revanhu rakapindura kuti: “Une dhimoni.+ Ndiani ari kutsvaka kukuuraya?” 21 Achipindura, Jesu akati kwavari: “Ndakaita basa rimwe chete,+ uye mose muri kushamisika. 22 Saka Mosesi akakupai kudzingiswa+—kwete kuti kunobva kuna Mosesi, asi kuti kunobva kumadzitateguru+—uye imi munodzingisa munhu pasabata. 23 Kana munhu achidzingiswa pasabata kuti mutemo waMosesi urege kuputswa, nei imi muri kunditsamwira kwazvo nokuti ndakaita kuti munhu anyatsova noutano hwakanaka pasabata?+ 24 Regai kutonga nezvinooneka kunze, asi tongai nokutonga kwakarurama.”+ 25 Naizvozvo vamwe vevagari vomuJerusarema vakatanga kuti: “Uyu haasi iye munhu wavari kutsvaka kuuraya+ here? 26 Asi, onai! ari kutaura pachena,+ uye hapana chavari kutaura kwaari. Chokwadi vatongi havasati vava kuziva here kuti uyu ndiye Kristu?+ 27 Isu tinoziva kunobva munhu uyu;+ asi panouya Kristu, hapana anofanira kuziva kwaanobva.”+ 28 Naizvozvo Jesu akashevedzera paakanga achidzidzisa mutemberi akati: “Munondiziva ini uye munoziva kwandinobva.+ Uyewo, handina kuzviuyira pachangu,+ asi iye akandituma aripo zvechokwadi,+ uye hamumuzivi.+ 29 Ini ndinomuziva,+ nokuti ndiri mumiririri akabva kwaari, uye Iye akandituma.”+ 30 Nokudaro vakatanga kutsvaka kumubata,+ asi hapana akaisa ruoko paari, nokuti awa yake+ yakanga isati yasvika. 31 Zvisinei, vazhinji veboka revanhu vakatenda maari;+ uye vakatanga kuti: “Kristu paanosvika, angazoita zviratidzo+ zvinopfuura zvaitwa nomunhu uyu here?” 32 VaFarisi vakanzwa boka revanhu richizevezera zvinhu izvi pamusoro pake, uye vapristi vakuru nevaFarisi vakatuma vakuru vakuru kuti vamubate.+ 33 Naizvozvo Jesu akati: “Ndicharamba ndinemi kwenguva duku, ndisati ndaenda kuna iye akandituma.+ 34 Muchanditsvaka,+ asi hamuzondiwani, uye hamungazouyi kwandinenge ndiri.”+ 35 Naizvozvo vaJudha vakataurirana kuti: “Munhu uyu anoda kuenda kupi, zvokuti hatizomuwani? Kuti anoda kuenda kuvaJudha vakapararira+ pakati pevaGiriki onodzidzisa vaGiriki vacho here? 36 Mashoko aya anorevei aati, ‘Muchanditsvaka, asi hamuzondiwani, uye hamungazouyi kwandinenge ndiri’?” 37 Zvino pazuva rokupedzisira, zuva guru romutambo,+ Jesu akanga amire uye akashevedzera, achiti: “Kana munhu aine nyota,+ ngaauye kwandiri anwe. 38 Uya anotenda mandiri,+ sezvakataurwa noRugwaro, ‘Hova dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukatikati make.’”+ 39 Zvisinei, akataura izvi pamusoro pomudzimu uyo vaya vakanga vatenda maari vakanga vava kuda kugamuchira; nokuti kusvikira panguva iyoyo pakanga pasati pava nomudzimu,+ nokuti Jesu akanga asati akudzwa.+ 40 Naizvozvo vamwe veboka revanhu vakanzwa mashoko aya vakatanga kuti: “Chokwadi uyu ndiye Muprofita.”+ 41 Vamwe vakanga vachiti: “Uyu ndiye Kristu.”+ Asi vamwe vakanga vachiti: “Ko Kristu+ anobva kuGarireya here?+ 42 Rugwaro haruna kutaura here kuti Kristu anouya achibva kuvana vaDhavhidhi,+ uye kubva kuBhetrehema+ musha waigara Dhavhidhi?”+ 43 Naizvozvo kupesana kwakavapo pamusoro pake pakati peboka revanhu.+ 44 Vamwe vavo, kunyange zvakadaro, vakanga vachida kumubata, asi hapana akaisa maoko ake paari. 45 Naizvozvo vakuru vakuru vacho vakadzokera kuvapristi vakuru nevaFarisi, uye ivava vakati kwavari: “Nei musina kuuya naye?” 46 Vakuru vakuru vacho vakapindura kuti: “Hapana mumwe munhu akambotaura saizvozvi.”+ 47 VaFarisi vakapindurawo kuti: “Hamungadaro matsauswawo here? 48 Pane mumwe wevatongi kana wevaFarisi atenda maari here?+ 49 Asi boka revanhu iri risingazivi Mutemo, vanhu vakatukwa.”+ 50 Nikodhimo, akanga ambouya kwaari, uye akanga ari mumwe wavo, akati kwavari: 51 “Ko mutemo wedu unotonga munhu kana usina kutanga wamunzwa+ uye wasvika pakuziva chaari kuita here?” 52 Vachipindura, ivo vakati kwaari: “Asi newewo unobvawo kuGarireya? Ongorora uone kuti hapana muprofita+ achamutswa achibva kuGarireya.” Zvakanyorwa nemaoko zvinoti, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, uye codex yeSinaitic Syriac zvinosiya ndima 53 kusvika kuganhuro 8, ndima 11, idzo dzinotaura (zvakasiyana-siyana mumagwaro neshanduro dzakasiyana-siyana dzechiGiriki) seizvi: 53 Naizvozvo mumwe nomumwe akaenda kumba kwake.